Berberi Ma Hiil Bay U Baahantahay Mise Hambalyo.? (Qaybtii 1aad – somalilandtoday.com
Berberi Ma Hiil Bay U Baahantahay Mise Hambalyo.? (Qaybtii 1aad
arka hore Nabad iyo Naruuro ayaan idiin rajaynayaa dhamaan Umadda islaamka, mar labaadkana waxii Afsoomaali ku hadla.
Akhristeyaal Saaxiiboyaal, Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa Qoraal Taxane ah, Oo iskugu jira Iftiimin iyo Xogsiinba, Maaha inaan u hadlaayo dan shakhsi oo aniga ii gaar ah. Maaha dhaleecayn qof nacayb iyo Shakhsi weerar. Ugama jeedo qoraal kaygan Raadsasho anfac iyo aduun oo Uma sii maraayo meel aan waxka doonaayo, balse ujeedka aan iskugu hawlay ee igu Ijbaaray waxaa weeyaan.
In mudo ahba waxaa SOCIAL MEDIA-YAHA kusoo baxaayey qoraalo iyo Sawiro ay inala wadaagayeen dad fara
badan Oo joogaa meelo kala disan sida gobolada Somaliland, iyo dalka debadiisaba, qoraaladaas Xogahaasi dhamaantood waxay daaranaayeen oo ay iskaga mid ahaayeen ujeedooyinka ay ka hadlayeen, Waxay ahaayeen HAMBALYOOYIN, BOGAADIN IYO BUUNBUUNIN qayral caadiya oo loo Tabinaayey qof amaba Masuul aan mudnayn aniga aragtidayda gaar ka ah. Waayo Hadaad maqashid masuul umadda adeege u ah oo waajibaadkiisa maalinlaha ah gudanaaya, oo lagu amaanaayo waxay u dhigan tahay laba mid uun.
1- in dadkan amaanayaa aanay aqoon u lahayn waxan ay ku amaanayaan Masuulkan oo aanay aqoonba waxaa ay qofkan shaqadiisu tahay.
2- iyo in ay tahay Barnaamij uu isagu abaabulkiisa leeyahay oo ah waxaa aynu u naqaano “IIDHEHDA” taas oo loola jeedo ama loola dan leeyahay, Yool Habaabin iyo Buunbuunin si Dadka waxma garatada ah loogu mashquuliyo, waxaan dani ugu jirin.
Haddaba waxba yaanan idinku badin sharaxaada mawduucayga oo aan toos u abbaaro ula jeedkkaygee, Waxaan rabaa inaan waxooga iftiimin ah idinkala wadaago Arin ku saabsan Magaalada Xeebeeda Berbera iyo Maayarka Magaaladaas Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan (CIDIN).
Magaalada berbera waa Magaalo aad u facweyn oo Taariikh badana leh oo aynaan halkan kusoo koobi karin, Balse Arintaas kagaba hadli maynee. Waxaan Mawduucan si qoto dheer ugaga hadli doonaa
Mustaqbal Xumaanta iyo Nasiib dara soo wajahday Magaaladii berbera ee Somaliland u ahayd KINSIGA dahabka ah ee dhaqaalaheena laf dhabarta u ahayd.
Akhriste ii ogolow inaad wakhti kooban ii raacdid Magaaladii berbera, ogow tagi mayno dalxiis iyo Tamashleyn ee waxaan doonayaa inaad Ila soo aragtid, Xaalka magaaladu ku sugan tahay hada, iyo inaan waliba kaaga sheekeeyo siday Berberi ahayd shan sano uun ka hor.
Aan kaga bilaabee markaad maraysid XABAALO TUMAALOOD tuulada loo yaqaan oo Magaalada Galbeedkeeda dhacda masaafo gaadhaysa 25KM. Waxaad u galaysaa Dhul seesan oo oo lamiga ku teedsan, Seeskastaa waxaa ka kooban yahay Cabir dhan 100m oo dherer ah iyo 100m oo kale oo balac ah. Waxaad is odhanaysaa tolow meeshan ma beer ayaa laga dhigayaa, Waayo Dee maaha meel guri laga dhisan karo oo magaaladii waxay u jirtaa 25KM, waa guriga magaalada ugu soo xiga.
Haddaad tahay qof ka yimid dhinaca Burco ama Sheekhna waxaad Seeska ugu soo galaysaa Tuulada loo yaqaano TUULO XAYAWAAN oo Koonfur kaga beegan berbera masaafo dhan 35KM. Waa sidii uun Sees aanay ishaadu dhinaciisa kale arkayn iyo Calaamad aad u aqoon sanaysid in dhulkani yahay arlo dad qayb sadeen oo mulkiyeen Lkn aanad garan karin waxaa loo isticmaalaayo.
Hada wali magaalo kuuma dhawa oo meelna 25km ayaa xigta meelna 30KM ku dhawaad. Ila soco Akhriste, Oo waxii aad aragtid ama kaa yaabiya ama aad iswaydiisid, hadhaw markaynu berbera gaadhno iwaydii hada wax badan baa kuu hadhaye. Waxaad taqaanay marka magaalo intaas loo jiro ama laga baxo inaad aragtid laba mid uun.
1- dhul beeralay ah oo aan laga aqoon Sees ama jagooyin.
2- iyo Dhul Xoolo daaqeen ah oo Meesiyada lagu foofiyo oo la kala lahayn. Balse Berberi la mid maaha ee hala yaabin.
Waxba hays waydiin Haddaad maqli jirtay Dhulka waxii magaalada ka baxsan 15KM, waxaa maamusha Wasaaradda Hawlaha guud, Berberi waxay haysataa sed bursigaas dheeraadka ah ee.
Hays waydiin anigana hay Su’aalin goorta iyo xiliga uu dhulkani magaalo noqonaayo oo Berberi soo gaadhayso, waayo dee aniguba garan maayo, Jawaabta oo kuma dhaamo. Haddaad maqli jirtay dawlada hoose waxay dorshaysaa oo qaybisaa kolba Bagcada ku haboon inay magaalawdo, oo ay deegaamaysaa Tanna aad aragtay fadlan Hays mashquulin, Berbera waxaa lagu kala gatay Qiimo jabane.
Hadda waxaynu soo gaadhnay berbera, waxaad joogtaa Halkay labada wado ku kulmaan SIIRO-GA.
Haddaba Berbera aan kaaga sheekeeyo, immika waad I fahmaysaa, waayo 25KM iyo 30KM ayaynu Seesas Iyo Calaamado soo dhaafaynay, Waan garanayaa Su’aalaha kusoo haraatiyaaya ee I dhagayso, anniga si aad Sawirada Maskaxda kuugu jira aad ugu heshid Jawaabo aad ku fahanto.
Aan Berbera kaaga bilaabo siday ahaan jirtay iyo siday tahay….